Azo alaina ao amin'ny Windows | koa izao ny sary Affinity Famoronana an-tserasera
Affinity Photo izao ao amin'ny Windows
Jose Angel | | Fitaovana famolavolana, Photoshop
Ny fifaninanana mivantana mivantana nataon'i Adobe dia hita ao amin'ny Windows. Ny fampiharana izay natambatra tamin'ny 2015 tao amin'ny App Store, zavatra izay efa fantatry ny mpampiasa mifandraika amin'ny vokatra Apple dia manitatra. Saingy tsy ny rehetra no nanana teo an-tanan'ny tanany. Izany no antony nahafahan'izy ireo tamin'ny faha-8 amin'ity volana ity nanambara fa ho afaka ho an'ny Windows izao.
Ny sary Affinity dia miaraka amin'i Designer hanohy ny fanitarana an'ity suite ity amin'ny sehatra hafa izay tsy nisy tsena. Ny Affinity Designer dia nambara tamin'ny 17 Novambra tamin'ity taona ity, zavatra iray, raha tsy fantatrao dia afaka mividy ihany koa ianao.
Ny App App Store tsara indrindra an'ny 2015 sy ny lozisialy tsara indrindra nataon'ny Technical Image Press Association in 2016 dia mitady hifaninana amin'ny tsena iray izay tsy fantatra ny fisiany. Ary mazava ho azy fa ho tianao izany. Ho fanampin'izay, tsy vitan'ny manambara ny fahatongavan'ireo rindrambaiko ireo amin'ny sehatra notarihin'i Bill Gates, fa manampy koa ireo fiasa vaovao izay arak'izy ireo "ho tianay".
Hita eto ny santionany horonan-tsary iray momba ny fampiharana: Affinity Photo. Hanome anao hevitra.
Raha miresaka momba ny Affinity Photo ireo fiasa vaovao lazain'izy ireo ho entin'izy ireo dia: fanitsiana 32-bit ao anatin'izany ny fanafarana OpenEXR sy ny fanondranana, ny fanitsiana ny solomaso mandeha ho azy, ny Macros handraketana sy hilalaovana ny baiko, ny HDR mandroso, ny sehatr'asa fanaovana feon-tsary feno hafa ankoatra ny hafa.
"Tanteraka ny hetahetantsika ho tonga fanatrehana endrika marobe"
Toy izao no namaritan'i Ashley Hewson ny dikan'ity fandefasana ity ho an'ny orinasany. Anisan'izany izay nambarany ihany koa fa "ity fanavaozana ity no lehibe indrindra hatreto." Raha tsy very ny fampiakarana izay tsy ho tsikaritr'ireo mpampiasa ny fanovana azy ary mbola hitohy ny antso tahaka ny hatramin'izao.
Mbola hitohy ny vidiny, € 49,99 miaraka amin'ireo fanavaozana tafiditra ary tsy misy famandrihana mandeha. Vidiny tsara ho an'ny fampiharana lehibe. Firaisana ve ianao sa Adobe?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Affinity Photo izao ao amin'ny Windows
Mahatalanjona io Photoshop io fa tsy iadian-kevitra na iza na iza saingy tsy maharary ny manana safidy hafa, ny omnipresence an'ny Photoshop indraindray dia mandreraka (raha mahita interface hafa fotsiny ary lasa adala indray), miaraka amin'ny vidiny raha mitazona mpanao sary, inDesign na Photoshop dia tsy maintsy mandoa an'io fotoana io fa indraindray miasa miaraka amin'ny CorelDRAW Graphics Suite X8 aho ary mahery tahaka izany koa.
Homeko antoka ity iray ity.
Juan | sary masina dia hoy izy:
Iray amin'ireo mpifaninana lehibe indrindra amin'ny Adobe Photoshop, Affinity Photo, tonga farany ho an'ireo mpampiasa PC. Tadidio fa ny programa beta dia tonga voalohany, ankehitriny ny Affinity Photo ho an'ny Windows 1.5 dia manana endrika mitovy amin'ilay kinova Mac.
Affinity Photo dia fantatra amin'ny fahombiazany sy ny hafainganam-pandehany. Ny rindrambaiko dia manolotra fanitsiana RAW be dia be, fampifanarahana rakitra, fahaizana manova amin'ny fotoana tena izy, ary miasa amin'ny toerana miloko rehetra.
Mariho fa ny Affinity Photo, izay navoaka tamin'ny volana lasa teo, dia miaraka amin'ny kit ny famolavolana tranonkala maimaim-poana.
Ho hitanao ny maha-mahafinaritra azy indrindra amin'ny fanovana sary 360 degre. Manoro anao izany aho :)
Mamaly an'i Juan | sary masina
5 volana hamitaana ity sary hosodoko feno zava-misy ateraky ny rahavavinao ity
Deconstructivism na korontana voafehy amin'ny ambaratonga lehibe amin'ity skyscraper any Thailand ity